Waa maxay soo noqoshada kuleylka, sida ay u dhacdo iyo sida ay u saameyso | Saadaasha Shabakadda
Qeybta 'troposphere', heerkulka ayaa hoos u dhacaya marka aan kor u qaadno joogga sare. Sidaa darteed, way ka caadi badan tahay inay ka qabowdo meelaha buuraha marka loo eego heerka badda. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira ifafaalooyin jawiga cimilada ah oo sababa isbeddel ku yimaada wejigan oo sababa in dib looga noqdo. Waxaa loo yaqaanaa Geddiska kuleylka. Waa geedi socod heerkulkiisu sare u kaco.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa waxa weeye kuleylka kuleylku, sida uu ku bilowdo iyo sida uu ula xiriiro wasakheynta hawada.
1 Waa maxay kuleylka kuleylka
2 Sidee loo rog rogaa
3 Sababta ay u dhacdo
4 Sidee Rogitaanku u Saameeyaa Wasakheynta
Waa maxay kuleylka kuleylka
Waa geedi socod heer kulkiisu uu kordhiyo dhererka. Taasi waa, meelaha ugu hooseeya ee magaalo, tusaale ahaan heerka badda, waxaan ka helnaa heerkulka hooseeya haddii aan buur fuulayno. Waa ka soo horjeedka waxa caadi ahaan dhaca.
Rogitaankan kuleylka ah waxaa sabab u ah qaar ka mid ah xaaladaha gaarka ah ee lakabyada hawada qabow ay ku soo dhacaan oo ay ahaadaan kuwo deggan. Aynu xusuusano qaar ka mid ah fikradaha aasaasiga ah ee dhaqdhaqaaqa jawiga hawada. Marka ay jiraan xinjirowga lidka ku ah hawadu waxay ka soo degtaa lakabyada sare duufaannada waxay ku dhacdaa wixii ka soo horjeedaa. Ka shaqee jidkaaga ilaa lakabyada sare. U rogitaanka kuleylka waxay ku dhacdaa xaaladaha anticyclone iyo xasiloonida jawiga weyn.
Ku-soo-noqoshada kuleylka waxaan ku arki karnaa sida hawada qabow ee ka timaadda lakabyada sare ay ugu dhaadhacdo lakabyada hoose ee ku dhow dhulka dushiisa. Dhaqdhaqaaqan hoos u socda ee hawada qabow waxaa loo yaqaan 'Subscome'. Dhamaan soo degitaankan, hawadu waa la isku cadaadiyaa marba marka ka sii dambeysa, iyada oo kordhineysa cadaadiskeeda isla markaana kordhineysa heerkulkeeda. Intaa waxaa dheer, waxay lumineysaa qoyaan sidaa darteed ma jiraan daruuro. Waan arki karnaa sida, markii ay gaadho dusha sare, ay is ballaadhiso oo ay kala baxdaa. Tani waxay ka dhigeysaa inay ku faafto dhammaan dusha iyada oo abuuraysa lakabyo xasilloon.
Sidee loo rog rogaa
Dhaqdhaqaaqa kor u kaca ee cufnaanta hawada ee kuleylka adduunka awgood waa la joojiyay oo waxaa suurtagal ah degganaansho la'aan. Maqnaanshaha dhaqdhaqaaqyadan hawadu waxay ka horjoogsanayaan miisaanka hawo ee heerkulka kala duwan inuu isku qasmo. Markay habeenkii timaado dhulku wuxuu lumiyaa heerkulka uu soo gaadhay maalintii isagoo ugu mahadcelinaya shucaaca qoraxda si dhakhso leh. Kuleylkan waxaa loo gudbiyaa hawada xiriir la leh dhulka. Hawo qabow ayaa aad u culus oo waxaa la dhigaa gunta hoose ee dooxooyinka sidaa darteedna, inta lagu jiro subaxda heer kulku wuu ka qabowyahay.
Waa in la xusuusnaadaa in xaaladahan ku-leexashada kuleylka hawadu ay ka soo degayso lakabyo sare oo ay diirimaad tahay si hawo diirran ay uga sii sarreyso hawada qabow. Tani waxay keenaysaa fur ama dabool inay samaysmaan. Maaddaama dhaqdhaqaaqa sare ee hawadu gebi ahaanba la xakameynayo maaddaama aysan jirin wax dabaylo ah oo la siiyay xasilloonida weyn, miisaannadan kala duwan ee dabeecadaha kala duwani isma dhex galaan sidaas awgeedna dhacdada ku-leexashada kuleylka ayaa dhacda.
Waxa ugu badan ee caadiga ahi waa in heer-kulka hawadu hoos ugu dhaco dhererka, laakiin kiiskan waxaa jira kuleylka kuleylka.
Sababta ay u dhacdo
Si ay u dhacdo ku-soo-noqoshada kuleylka ah, xaalado kala duwan waa inay dhacaan. Habeenkii, dhulka dushiisa si dhakhso leh ayuu u qaboobaa, isaga oo lumiya kuleylka maalintii oo dhan ku ururay. Lakabka hawadani wuxuu leeyahay heerkul ka hooseeya kan isla markiiba ka sarreeya. Taas macnaheedu waa in hawadu ay leeyihiin cufnaan kala duwan, taas oo ka hortageysa inay isku qasmaan. Marka qorraxdu mar labaad soo muuqato waxay bilaabeysaa inay saxdo kuleylka kuleylka waxayna uraysaa inay diiriso dusha sare ee dhulka, dib u soo celinta xaaladaha caadiga ah.
Dhacdadani waxay ku dhacdaa si aad u ballaaran meelaha dooxada maaddaama qaboojinta irradiation-ka ay ka badan tahay. Haddii ay jirto kala duwanaansho sare oo u dhexeeya heerkulka habeen iyo maalinba, waxay u badan tahay inuu jiro rogasho kuleyl ah. Marka uu jiro rogasho kuleyliyaha si fudud ayaa loo aqoonsan karaa. Tan waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in ceeryaanta ama qiiqu u janjeeraan agagaarka dhulka dushiisa. isla markaana fidsan. Way ku badan tahay inay ka dhacaan aagagga badda iyo meelaha dooxada. Waxay badanaa ku dhacdaa meelaha ay, qaab-dhismeedkeeda awgeed, wareegga hawada ee caadiga ahi ku adag yahay.
Sidee Rogitaanku u Saameeyaa Wasakheynta
Waxaan soo sheegnay in inta lagu jiro geedi socodka kuleylka kuleylka lakab xasiloonida cimilada lagu soo saaray dhulka dushiisa. Lakabkaan wuxuu ka kooban yahay hawo qabow oo cufan kuna sii jirta lakabka hoose. Tani waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn in la isku daro labada lakab oo hawo ah oo leh cufnaan kaladuwan marka ay leeyihiin heerkul kala duwan. Sidaa darteed, way fududahay in la soo gabagabeeyo in mid ka mid ah saameynta ugu weyn ee soo-noqoshada kuleylka uu sababi karo ay tahay taas wasakhda ayaa ku xanniban dhulka dushiisa iyada oo aan suurtagal ahayn in lagu kala firdho jawiga.
Caadi ahaan, hawadu waxay u egtahay inay kacdo waxayna noo ogolaaneysaa inaan ku kala firdhino wasakheynta jawiga meelaha hoose. Si kastaba ha noqotee, ku-soo-noqoshada kuleylka, heerkulka sare ee heer-kulka wuxuu u dhaqmaa sidii dabool hawadda qabow ee taabashada dusha ciidda. Tani waa halka ay ku keydsan yihiin qaddar badan oo wasakhda ah. Mid ka mid ah cawaaqibta degdegga ah waa qiiq. Lakabkan wasakhaynta waxaa laga arki karaa dhowr kiilo mitir oo ka fog wuxuuna badanaa keenaa hoos u dhac ku yimaada heerarka tayada hawada.
Cawaaqib xumada ka dhalata caafimaadka aadanaha ee ifafaalahaan waxaa loo tarjumay kordhinta la-tashiga caafimaadka sababo la xiriira dhibaatooyinka neef-mareenka iyo wadnaha. Waa in lagu xisaabtamo in neefsashada hawo wasakhaysan gaar ahaan weerarada kooxaha halista ah sida dadka jiran, waayeelka ama caruurta. Waana in heerarka nitrogen dioxide iyo baaruud dioxide la keydiyaa inta lagu jiro xilliyada rogitaanka kuleylka. Intaas waxaa sii dheer, 10 iyo 2.5 walxaha xajmiga 'micron' ah ayaa urursan oo dhex gala alveoli sambabada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto ifafaalaha ku-soo-noqoshada kuleylka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Geddiska kuleylka